စတီရီယို ဂီတလုလင် တက္ကသိုလ်အေးမောင် နဲ့ Legendary The ELF Music Band* - booksmyanmar
စတီရီယို ဂီတလုလင် တက္ကသိုလ်အေးမောင် နဲ့ Legendary The ELF Music Band*
booksmyanmar on August 23, 2021
ကိုအေးမောင်အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ရင် ပထမဆုံးတွေးမိတာက သူကစွယ်စုံတူရိယာပညာရှင်၊ ဂစ်တာမျိုးစုံနဲ့ ဒရမ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာတီးခတ်နိုင်သူ၊ ဟိုးပါလီမန်ခေတ်က ဂီတလုလင်ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တပ်လို့မရပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူ အဆင့်နဲ့ တူရိယာမျိုးစုံ (ဘယ်နှစ်ခု ဆိုတာတော့ မသေချာ) တီးခတ်တတ်ရပါမယ်။ ဂီတလုလင် ဦးကိုကိုကတော့ နာမည်ကြီးပေါ့၊ ကျွန်တော်သိသလောက် ဦးကိုကိုက စန္တရားနဲ့ ပတ္တလား တီးတတ်တယ်။
တကယ်ဆို တက္ကသိုလ်အေးမောင်က ပလေးဘွိုင်အဖွဲကကိုသန်းနိုင်၊ ကိုစိန်လွင်တို့ထက် အရင် နာမည်ကြီးသူပါ။ ပြောရရင်တော့ စတီရီယိုဘိုးအေကြီး တစ်ပါးပါပဲ၊ သိကြတဲ့အတိုင်းကိုအေးမောင်က ငွေကြေးတောင့်တင်းပြီး ဂီတကို ဝါသနာကြီးသလောက်၊အောင်လည်း အောင်မြင်လှတဲ့ ဘီတီဘရားသားမိသားစုက ပေါက်ဖွားလာသူတစ်ယောက်ပါ။ အဆိုတော် ဦးအံ့ကြီး၊ အသံဖမ်း ဦးဘသိန်းတို့ကတော့ နာမည်အကြီးဆုံးပေါ့။
သူတို့ညီအကိုတွေအားလုံးစစ်ပြီးခေတ် ပါလီမန်ခေတ် – ခေတ်ကောင်းမှာ မွေးဖွား ကြီးပြင်းခဲ့ကြတယ်။ ကိုစိန်လွင် (၁၉၄၈)၊ ကိုအေးမောင် (၁၉၅၀) နဲ့ ကိုသန်းနိုင် (၁၉၅၀) ၊ ကိုတင်အောင်မိုးက အကြီးဆုံး (၁၉၄၈ မတ်လ)။ ဦးလေးတွေက ဂီတဝါသနာရှင်တွေ ဆိုတော့ဒီလူငယ်လေးတွေကလည်း ငယ်ငယ်ထဲက ဂီတနဲ့ နီးစပ်ကြတယ်။ (ဦးဘသိန်းရဲ့ သမီးငယ်အမနှင်းနှင်းအေးက ဒီအကြောင်းတွေ ရေးနေကျမို့သိချင်ရင်သူ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာ ရှာဖတ်လို့ရပါတယ်)
သူတို့ညီအကိုတွေစုပေါင်းပြီး ၁၉၆၈ လောက်မှာ “Dream Makers” – အိပ်မက်ပြုလုပ်သူများ အမည်နဲ့ Local Talent အဖွဲ့လေး တစ်ခုဖွဲ့ကြတယ်။ ဘယ်သူတွေဘာတီးကြတယ်မသိပေမယ့် ကိုအေးမောင်က Lead Guitar ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ၁၉၇၀ မှာဘာကြောင့်မှန်းမသိအဲဒီအဖွဲ့ကွဲသွားကြတယ်။
ကိုသန်းနိုင်က ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ရွှေရတုပွဲမတိုင်ခင်လေးမှာ Shades မှာတီးနေတဲ့ ကိုသိန်းတန်၊ကိုတော်မီတို့နဲ့ ပလေးဘွိုင်း အဖွဲ့ကိုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့ကိုအေးမောင်က ၃လပဲကွာပြီး ရန်ဖြစ်ပြန်ချစ်မို့သူ့ကိုမခေါ်ခဲ့တာအကြောင်းတော့ရှိမှာပါ။
အဲဒီအချိန်က အခုလို ဂီတဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေ တီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး BBS Local Talent အစီအစဉ်မှာ လွှင့်ကြတယ်၊ ပြီးတော့ ပါတီတွေ ဧည့်ခံပွဲတွေမှာ တီးကြတယ်။အဓိကကတော့ နိုင်ငံခြားသံရုံးဧည့်ခံပွဲတွေမှာပါပဲ။ တစ်ညတီးရင် (သို့) ပွဲ တစ်ပွဲငှားရင် ကျပ်တစ်ထောင် ရတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အဖွဲ့ကောင်းဆိုရင်ပေါ့လေ…ကိုအော်စတင်နဲ့ P Morgan တို့က Tamps / ကိုစိန်လွင်တို့က Saints / ကိုဗစ်တာ (နောက်) သိန်းဟန်၊တော်မီတို့ကShades / ကိုစိုးပိုင်တို့က Sleep walkers စသည်ဖြင့်။
အားလုံးထဲမှာတော့ ELF (မှင်စာလေးများ) အဖွဲ့ကအတော်ကို နာမည်ကြီးပါတယ်၊ သူတို့ဝိုင်းက အင်အားတောင့်တယ်… ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီကြီးမှာ လုပ်တဲ့ Mr. Roland ဆိုတဲ့သူကနောက်ကွယ်ကနေ ငွေအား၊ စက်ပစ္စည်းအားတွေ ကူညီတယ်လို့ လူကြီးတွေ ပြောပြတာကြားဖူးခဲ့တယ်။ တီးဝိုင်းတစ်ခုမှာ စက်ပစ္စည်းနဲ့ ငွေအားက အရေးကြီးပါတယ်။ အဖွဲ့ကပင်တိုင်အတီးသမား Fred နဲ့ ဇေယျာချန်ထွန်းတို့ညီအကို နှစ်ယောက်ကလည်း လူကုံတံပညာတတ်ရှေ့နေချုပ်ဦးချန်ထွန်းရဲ့သားတွေပါ။
ပြည်လမ်း ၆မိုင်ခွဲမှာ တစ်ဧကနီးပါးကျယ်တဲ့ အင်းလျားကန်စပ်ကခြံမှာနေကြတာ။ အဖွဲ့အနေနဲ့ ခေတ်ကလည်း အာဏာသိမ်းပြီးဆိုပေမယ့် ခေတ်ကောင်းဆိုတော့ စတိုင်လ်ကောင်းရမယ်၊ အားလုံး အင်္ဂလိပ်လို ဆိုတတ်ရမယ်။ ELF အဖွဲ့ရဲ့ Line-up ကို ကြည့်ပါဦး။
Lead – Reggie Ba Oo (တက္ကသိုလ်အေးမောင်)
Second Lead/Keyboard – ဇာလျန်း
Bass – ဖရက်ဒ်ချန်ထွန်း
Rhythm – ဇေယျာချန်ထွန်း
Drums – အော်စကာသန်းတင်
Vocal – Ricky Latt နဲ့ Darlington Din
အဲဒီအချိန်တုန်းက အသံသွင်း စတီရီယိုစျေးကွက် စပေါ်ကာစ ဆိုတော့ အခုလို အပျော်ဖွဲ့ထားတဲ့ Semi-Pro ဝိုင်းတွေက ရန်ကုန်မှာ ခေတ်စားပါတယ်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်လောက်အထိ ဆိုကြပါတော့။ ပြောရရင်တော့ ကိုအေးမောင်က အတီးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ELF အဖွဲ့ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုအေးမောင်ရဲ့ တီးဟန်ကို တွေ့ဖူးရင် သိကြမှာပါ။ သူက Free Style တီးတဲ့ပုံ လက်ကွက်တွေ တီးဟန်တွေက အရမ်းလှတယ်။ Black Magic Woman ဆို သူ့ရဲ့ favorite ဖြစ်မလားပဲ။ ၁၉၇၀ တက္ကသိုလ် ရွှေရတု နောက်ပိုင်းမှာ ကိုသန်းနိုင်က Shades အဖွဲ့က ကိုသိန်းဟန် နဲ့ တော်မီကျော်နိုင်တို့ကို ခေါ်ပြီး Playboys အဖွဲ့ ဖွဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်ရဲ့ “မာမီရယ် ရှာပေးကွယ်” အချိန်လောက်ပေါ့။ ခန့်မှန်းကြည့်ရတာ အဲဒီအချိန်က စတီရီယိုခေတ်ရယ်လို့ ပေါ်ကာစလည်း ဖြစ်နေ၊ တီးတတ်တဲ့သူတွေကလည်း သိပ်မများတော့ အဖွဲ့တွေ မကြာခဏ ကွဲကြ ပြောင်းကြ၊ အတီးသမားတွေကလည်း နှစ်ဝိုင်း၊သုံးဝိုင်း လိုက်တီးကြ… စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကိုအော်စတင် ပြောဖူးပါတယ်၊ ၁၉၆၉-၇၁ မှ လပိုင်းလေးတွေပဲ ခြားကြတာမို့ ဘယ်အဖွဲ့က ဘယ်လို ဘယ်က စဖွဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောရခက်မှာပါ။ (ဦးသိန်းတန်၊ကိုသန်းနိုင်၊ကိုအော်စတင်တို့ကို သေသေချာချာ မေးမြန်းသင့်ပါတယ်)
ELF အဖွဲ့က အဆိုတော် Ricky Latt နဲ့ Darlington ကလည်း အတော် အဆိုကောင်းပြီး နာမည်ကြီးကြတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ Ricky Latt ကတော့ အခု Germany မှာ ရှိနေပါတယ်၊ Darlington ကတော့ မရှိတော့ပါ။ နောင်တစ်ချိန် နာမည်ကြီးလာမယ့် “စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး” သီချင်းကို သူက ELF အဖွဲ့နဲ့ သီဆို အသံသွင်းခဲ့တာပါ။ သီချင်းကို စုပေါင်းပြီး ရေးပေမယ့် (ကိုသန်းဌေး၊ကိုဇာလျန်းနဲ့ ကိုအေးမောင်) – တေးရေးကို ကိုဇာလျန်းကိုပဲ နာမည်ခံစေခဲ့ပါတယ်။ အလယ်က စကားပြောတဲ့နေရာက ကိုအေးမောင်ပါ။
အဆိုတော်လားရှိုးသိန်းအောင်က သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးအခွေ “ပြောပါရစေ နန်းလေး” ကို Playboys အဖွဲ့နဲ့ အသံသွင်းခဲ့ပေမယ့် သူ အရမ်းပေါက်ခဲ့တဲ့ “အမေတစ်ခု သားတစ်ခု” အခွေကိုတော့ ELF အဖွဲ့နဲ့ တီးပြီး အသံသွင်းခဲ့တာပါ။ ELF အဖွဲ့က သွင်းခဲ့တဲ့ အခွေအရေအတွက် သိပ်မများတာမို့ အဲဒီအခွေကိုလည်း Playboys က တီးခဲ့တယ်လို့ အများစုက ထင်ကြပါတယ်။ ကိုအေးမောင်ရဲ့ ဂီတာသံတွေကို အဲဒီအခွေမှာ ကြားရပြီး အတော်လည်း လူသိများခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့ အထင်ကတော့ စတီရီယိုခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါ အပျော်တမ်းအဖွဲ့တွေကနေ Professional ဝိုင်းတွေ ပြောင်းဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာ ELF က ကိုဇာလျန်းနဲ့ ကိုအော်စကာ က Aces ကို ပြောင်းသွားရာက ELF လည်း အင်အားနည်းသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုအေးမောင်ကလည်း သူ့ရဲ့ ညီဝမ်းကွဲ ကိုသန်းနိုင် တည်ထောင်တဲ့ Playboys ကို Second Lead အနေနဲ့ ရောက်သွားတာကြောင့်လည်း ပါပါလိမ့်မယ်။
ကိုအေးမောင်က Playboys မှာ တီးနေရင်း ELF ကိုလည်း ဆက်လက် ကူညီတီးခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ELF မှာ Drums အနေနဲ့ Superstar က ကိုပီတာဘသိန်း နောက် The Wildones က ဂေါ်ဒင်ပေါ၊ အော်ဂင် ကိုအင်ဒရူးကောင်း၊ နောက် Peter Paw စသည်ဖြင့် ရောက်လာကြပါတယ်။ ၁၉၇၅ လောက်အထိ ELF က Semi-Pro အနေနဲ့ပဲ ဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၅ ဒီဇင်ဘာကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်း အာဏာရှင်ကြီး ဦးနေဝင်း အင်းလျားကန်ဟိုတယ်က ခရစ်စမတ်အကြိုညပွဲကို ဝင်ဖျက်တော့တီးနေတာက ELF တီးဝိုင်းပါ။ အဲဒီနေ့က ELF မှာ တက္ကသိုလ်အေးမောင်၊ Fred နဲ့ ယျောချန်ထွန်း၊ Peter Paw နဲ့ Gordon Paw. ELF က ခဏနားနေချိန်မှာ ဧည့်သည်တီးဝိုင်း E-Machine တီးပါတယ်။ P. Morgan (Lead)၊ Bass ကိုရဲလွင်၊ organ တင်ဝင်းလှိုင်၊ Drums ကျော်ဆွေဟန် တို့တီးနေတဲ့အချိန် – ဆိုနေတာကတော့ စိုင်းထီးဆိုင်၊ သီချင်းက Killing me softly လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ဦးနေဝင်း Drum Set ကြီးကို ထိုးဖောက်ပြီး ပွဲဖျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော် သီးသန့်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြောချင်တာက သူက အဲဒီညက ပွဲကိုပဲဖျက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အင်းလျားလိပ်က ဒိုမီနိုကပွဲ၊ ဧည့်ခံပွဲ၊ ပွဲတကာပွဲ အကုန်ပျက်တဲ့ညပါပဲ။
ကိုအေးမောင်က ၁၉၇၅ ကနေ ၁၉၇၉ အထိ ပလေးဘွိုင်း အဖွဲ့မှာ Second Lead နဲ့ Slide Guitar တီးခဲ့ပါတယ်။ အများသိကြတဲ့အတိုင်း ပလေးဘွိုင်းနဲ့ ကိုအေးမောင်ရဲ့ စတိုင်လ်က လိုက်ဖက်လှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုသိန်းတန်က သူ့ထက်အရင် ရောက်တာရယ်၊ နုတ်စ် ပိုင်နိုင်တာရယ်၊ နောက်တစ်ခုက ကိုအေးမောင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အချိန်ပြည့်တီးချင်ပုံ မရတာရယ်ကြောင့် Second Lead ပဲ ဆက်တီးနေပါတယ်။ ဟိုခေတ်က (Jimmy Hendricks / Ventures) တို့နဲ့ တီးကြတော့ Free Style တီးကြတာပါ။ Notes ရယ်လို့ ရေးပြီးတီးကြတာ မဟုတ်၊ ကျွန်တော်တို့အခေါ် Hearing – နားကြားနဲ့ပဲ တီးကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း တီးဝိုင်းကြီးတွေက အသံသွင်း၊ ကက်ဆက်ခွေတွေဖက်ကိုလှည့်တော့ အသံသွင်းရင် Notes တွေနဲ့ အတိအကျ တီးကြရပါတော့တယ်။
ကိုအေးမောင်က လွတ်လွတ်လပ်လပ်တီးချင်ပုံရပါတယ်။ Recording မှာ တီးရတာ ပျော်စရာ မကောင်းလှပါ။တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ခေတ်က နုတ်စ်တတ်သူကလည်း လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ Lead ကိုပက်ထရစ်ရဲ့ အဖေ၊ဆရာကြီး Richard Miller ကတော့ International Notes ကျွမ်းကျင်သူပါ။
ဒါနဲ့ပဲ Aces ကအာစရိလို့ခေါ်ကြတဲ့ ဦးသန်းရွှေက အခု သုံးနေကြတဲ့ 1234မြန်မာ Notes system ကို တီထွင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူကပဲ Acesကအတီးသမားတွေကို သင်ကြားပေးရင်းနဲ့ နောက်တော့ မြန်မာစတီရီယိုလောကမှာ ပျံ့နှံ့အောင်မြင်သွားခဲ့တယ်။ ဟိုအရင်ကကက်ဆက်စီးရီးစ် တစ်ခွေကို တစ်ရက်ထဲ အပြီးသွင်းကြရတာပါ။ အတီးရောအဆိုပါ တစ်ခါတည်းသွင်းကြရတာမို့ နုတ်စ်မရှိရင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
၁၉၇၉ ပန်းသီးဖီလင်အခွေ သွင်းနေတုန်းမှာပလေးဘွိုင်အဖွဲ့ ကွဲပါတယ်။ တီးစရာသီချင်းတစ်ချို့ကျန်နေတာဦးဘသိန်း စတူဒီယိုမှာ ဆက်သွင်းတော့တီးဝိုင်းသမားတွေကိုသိန်းတန်နဲ့ ကိုသန်းနိုင် ဘယ်အချိန်ထချကြမလဲလို့ စိတ်ပူနေရခဲ့တယ်တဲ့။ကိုသန်းနိုင်က သိတဲ့အတိုင်းငယ်ငယ်က စိတ်ဆတ်တယ်လေ။အဲဒီအခွေမှာ ကိုအေးမောင်ရဲ့လက်သံတွေအများကြီးပါပါတယ်။ “ပင်လယ်ပြင်သင်္ဘောမှောက်ခြင်း” ဆိုရင် ကိုအေးမောင်တီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထွက်တဲ့ “ဇင်ယော်လေးဖြစ်ချင်တယ်”ကတော့သိပ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
အဲဒီအချိန်မှာကိုသိန်းတန်က LPJ ကို ဖွဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ Stage show ဦးစားပေးပြီး တီးခဲ့တယ်၊ ပထမဆုံးပွဲကို လမ်းမတော် ရွှေပုစွန်ရှေ့နဲ့ ဗဟန်းဟာမစ်တစ် ဘောလုံးကွင်းမှာလုပ်ခဲ့ပြီးအောင်လည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ကိုသန်းနိုင်ကလည်းလူငယ်လက်သစ်တင်ဦးသောင်း ကြည်ဝင်းသောင်းတို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်၊ Rhythm နဲ့ Arrangements ကိုကျော်မင်း၊ Drumsစံလင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးPlay Boyအဖွဲသစ်ကို ၁၉၈၀ မှာဖွဲစည်းခဲ့ပါတယ်။
သူ့တို့ရဲ့ပထမဆုံး အခွေကတော့ရွှေသီချင်းများ ဖြစ်ပြီး အရမ်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုအေးမောင်ကတော့ အဲဒီ Play Boy မှာ Section Player အနေနဲ့ Lead ကိုအချိန်ရရင်ရသလို တီးခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Play Boy Stage Show တွေမှာ တီးခဲ့တယ်။ Live Show ဆိုတော့တီးရတာ လွတ်လပ်တယ်၊တီးလို့ ကောင်းတယ်လေ။
ကိုအေးမောင်က ၁၉၈၄ ခုနှစ်ကိုသန်းနိုင် အော်စီကိုသွားလို့ ပလေးဘွိုင်အဖွဲ့ဖျက်သိမ်းတဲ့အချိန်အထိ ပလေးဘွိုင်မှာတီးခဲ့ပါတယ်။ ကိုအေးမောင်ကအတီးသမားတယောက်အနေနဲ့ မြန်မာစတီရီယိုလောကရဲ့နာမည်အကြီးဆုံး တီးဝိုင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Playboys နဲ့ ELF မှာတီးခဲ့တာပါ။တကယ့် စတီရီယိုဂန္တဝင်အတီးပညာရှင်ပါ။
ကိုအေးမောင် နဲ့ ခေတ်ပြိုင်တွေကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်း
Austin Xavier – Tamps/Telstar/Aces/Rays
သိန်းတန် မြန်မာပြည် – Playboys/ LPJ
P. Morgan – Tamps/ Electric Machines တို့ပါ။
တခြား Guitar players တွေရှိခဲ့ပေမယ့် ထိပ်တန်းငါးယောက်ထဲမှာ ကိုအေးမောင် ပါခဲ့ပါတယ်။ ကိုသိန်းတန် နဲ့ ကိုအေးမောင်တို့အတွဲက တကယ်တွဲဖက်ညီပြီး အတော် ကောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ အတ္တသမားကျနော် နဲ့ အဓိပတိလမ်းကလူ အခွေတွေ အရမ်းကောင်း။ ဘယ်ဝိုင်းမှာမှ Lead Guiter သမားကောင်း နှစ်ယောက် မရှိခဲ့ပါ။ ကိုသိန်းတန်က တလုံးချင်း ပီပီသသ၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် တီးတတ်သူ၊ ကိုအေးမောင်က Free Style အနောက်တိုင်းဆန်ဆန် မုဒ်နဲ့တီးတတ်သူ။
ဒါကြောင့် Stage Show တွေမှာဆို Playboys အဖွဲ့က အရမ်းအောင်မြင်ပြီး နားထောင်လို့လည်း သိပ်ကောင်းပါတယ်။ အဆိုတော်တွေကလည်း စုံမှ စုံ…။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ELF အဖွဲ့အကြောင်း ရေးဖို့တွေးနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ အာဏာသိမ်းတာရယ် ကိုဗစ်ကိစ္စတွေနဲ့ စိတ်မကြည်တာကြောင့် မရေးဖြစ်သေးတာ၊ အခုကိုအေးမောင် ဆုံးတယ်ဆိုတော့ သူ့ကို ဂုဏ်ပြုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ တမင်အားယူပြီး ရေးလိုက်တာပါ။
သမိုင်းကြောင်းမဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှနဲ့ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေ ရေးထားတာမို့ အမှားတွေ ပါရင် ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် မှတ်ထားပြီးပြင်ဆင်ပါ့မယ်။ ကိုအေးမောင်အရေးအဆိုတော်တဲ့အကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ multiple recording တွေအကြောင်း၊ သူစွယ်စုံရတဲ့ အကြောင်းတွေ နဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေပါတစ်ခါတည်းဆက်ရေးဖို့က အရမ်းရှည်နေတာကြောင့်နောက်ထပ် စာစုတစ်ခုအနေနဲ့ ဆက်ရေးပါ့မယ်။
စတီရီယိုခေတ်ဦးမှာ စတင်ပါဝင်ခဲ့သူ၊ အတီးပညာရှင်၊ အဆိုပညာရှင်၊ စွယ်စုံတော်သူ တက္ကသိုလ်အေးမောင် (Reggie Ba Oo) ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု့ကြီးပါ။ ကိုအေးမောင်က ယနေ့ခေတ်ရဲ့စတီရီယိုလောကကြီးကို အစပထမလမ်းခင်းပေးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Rest in peace & you will be missed.
(ကျေးဇူးတင်ရသူများ ….၂၀၁၃- ၇၈၉အဖွဲ့မှာစသိခဲ့ကထဲက တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော စတီရီယိုခေတ်ဦး ဗဟုသုတများကိုအလျင်းသင့်သလို စေတနာနဲ့ဝေမျှပေးနေသောအသံဖမ်း ဦးဘသိန်းရဲ့သမီးလတ် အမနှင်းနှင်းအေး၊ ELF အ​ကြောင်းကို အမြဲစိတ်ဝင်တစားပြောတတ်သောအကိုကြီးကို Nelson ဥာဏ်ဝင်း၊ ရှားပါး ELF အဖွဲ့ဓါတ်ပုံများအားကျနော်ရေးနေမှန်းမသိပဲအမှတ်တရပို့ပေးခဲ့သူ ကိုခင်မောင်ကြူ နဲ့မူရင်းပိုင်ဆိုင်သူ ကိုဇေယျာချန်ထွန်းရဲ့ဇနီးမတီနာ Teena၊ ရှားပါး “စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး” မူရင်းသီချင်းကို ဝေမျှပေးခဲ့တဲ့ ကိုထင်မော် (စိုးစံ)။
ကျနော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝက နားစွန်နားဖျားပဲ ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ Legendary The ELF music band အ​ကြောင်းကို အခုရေးခွင့်ရလို့ အထူးပဲကြည်နူးရပါတယ်။)